Nezvedu - Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD yakavambwa muna 2004, inogamuchirwa seimwe yevanoremekedzwa nyika dzese vanogadzira yakaderera magetsi CIRCUIT BREAKER muChina. Zvakasiyana zvigadzirwa zvinofukidza zvidiki dunhu mabhureki (MCB), zvakasara zvazvino dunhu mabhureki (RCCB), Residual Yazvino Circuit Mabhureki NeYakadzama Kudzivirirwa (RCBO), yakaumbwa kesi kesi mabhureki (MCCB), AC Contactor, thermal zadzisa relay, Mota Dziviriro Dunhu Rinotyora , nezvimwe.
Nei uchisarudza CDADA?
Iri Boka, rine matatu mafekitori, ine nzvimbo yekugadzira ye52,400m² uye inoshandisa vanopfuura vashandi ve500.
Isu tinoshandisa yekurova musangano, jekiseni kuumbwa musangano, hydraulic musangano, kuona nzvimbo yekumonera uye riveting semusangano, musangano wegungano, uye semusangano wekuongorora mhando unosangana nezvose zvedu zvemhando yepamusoro zvinodiwa.
Iyo yekugadzira nzvimbo inoshandirwa nevashandi ve400 vanosanganisira makumi matatu nevashandi vehunyanzvi, uye makumi matatu epamusoro manejimendi vashandi Isu tine akawanda maindasitiri nyanzvi mune yakaderera-magetsi magetsi emagetsi.
Nekuda kwenzvimbo iyi yepamusoro yekubudirira, isu takapfuura goho repagore re800,000 MCCB uye zviuru zvishanu zveMCB.
Yedu yedunhu mudariki zvigadzirwa zvakagadzirirwa kugadzirisana dzakasiyana siyana dzekumisikidza zvido zvevashandisi vadiki nzira yese kune maindasitiri transformer zvinotsiva uye magetsi ekuparadzira zviteshi. Uchawana zvigadzirwa zvedu zvakaiswa muzvigayo zvesimbi, mapuratifomu emafuta, zvipatara, zviteshi zvechitima, nhandare dzemakomputa, zvivakwa zvemahofisi, zvivakwa zvehofisi, nzvimbo dzemusangano, nzvimbo dzemitambo, skyscrapers, uye chero chimwe chivakwa chine magetsi anoda.
Dada anoramba akazvitsaurira mukusimudzira uye kugadzira kweanopwanya wedunhu. Takabudirira kuwedzera bhizinesi redu repasirese kune nyika dzinopfuura makumi maviri nematunhu muEurope, America, Middle East, Africa neSoutheast Asia.
Kwemakore mazhinji, isu takatora chikamu mukubhidha purojekiti yeChina yenyika grid, tichivaka kambani yedu brand uye nekuwedzera kugona kwedu uye kusvika. Isu tinoramba tichisvika pachinangwa ichi nekuomerera kune yakasarudzika uzivi hwe "Funga zvakanyanya kune vatengi uye ita zvirinani kune mutengi". Pakupedzisira, isu tinovavarira kuwedzera iyo smartization yemagetsi manejimendi uye isu takazvipira kuve wepasirose-mutungamiri mutungamiri mune zvemhando zvigadzirwa zvemagetsi. Dada anotarisa kushandura iyo Chinese magetsi system, asi zvakare epasirese.
• CDADA yakazvipira kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nekupa zvigadzirwa kubva kune vanogadzira vepamusoro uye nekupa yekutanga-vatengi vatengi.
• Takazvipira kupa makambani epasirese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekutyora zvigadzirwa kuti vabatsire kukwikwidza mumusika wanhasi.
Yedu R & D timu yakanangana nekuvandudza hunyanzvi wedunhu breaker tekinoroji kuona kuti vatengi vedu vanowana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
• Vashandi vedu vane makore anopfuura makumi matatu ezviitiko anopa zvakavanzika zvevatengi nhanho dzese dzenzira.